Manandhar – PathivaraOnline
Home > Manandhar
Manandhar March 31, 2018 March 31, 2018 खेलकुद, समाचार	0
एजेन्सी। ७ अप्रिलदेखि इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) सुरु हुँदैछ । आइपिएलको यो ११ औं सिजन क्रिकेट प्रेमीहरुको लागि विशेष हुँदैछ । यसको कारण हो नयाँ नियमहरु । यस पटक आइपिएलमा केही नयाँ नियमहरु देखिनेछन् जो यसअघि पहिले कहिल्यै देखिएका थिएनन् । १. खेलाडीको टिम परिवर्तनः यस पटकको आइपिएलमा सबैभन्दा रमाइलो नियम
Manandhar March 31, 2018 खेलकुद	0
एजेन्सी। बल टेम्परिङमा दोषी मान्दै अस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डले कप्तान स्टिभ स्मिथ र उपकप्तान डेभिड वार्नरमाथि १ वर्षको प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय क्रिकेटर गौतम गम्भीरले अक्ष्ट्रेलियाको बोर्डको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । गम्भीरल भनेका छन् ‘कहिँ क्रिकेट अस्ट्रेलियाले यी दुईलाई बोर्डसँग गरेको विद्रोहको सजाय त दिइरहेको छैन ?’ केही अगाडि अस्ट्रेलियाका
डिसी नेपाल / बुटवल । बुटवलमा जारी तेस्रो मदन भण्डारी गोल्डकपको पहिलो समिफाइनल खेल स्थगित भएको छ । ललितपुरको थ्री–स्टार फुटबल क्लव र आयोजक मदन भण्डारी एकेडेमीबीच तय भएको खेल वर्षाका कारण हुन नसकेको हो । खेललाई आईतबारको लागि सारिएको छ । अब शनिबार हुने अर्को सेमिफाइनल खेलमा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवले साविक
फ्लोरिडा÷एजेन्सी । अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा जारी मियामी ओपन टेनिस महिलातर्फ स्लोएनी स्टेपहेन्स र जेलेना आस्टापेन्कोबीच उपाधि भिडन्त हुने भएको छ । शुक्रबार दोस्रो फाइनल प्रवेशको खेलमा युएस ओपनकी विजेता अमेरिकी स्लोएनी स्टेपहेन्सले बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई पराजितगर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेकी हुन् । पहिलो सेटमा ३–५–६ को सेटमा पराजित भएकी स्टेपहेन्सले भिक्टोरिलालाई
Manandhar March 31, 2018 विचार, समाचार	0
सुमन घिमिरे उर्लाबारी, मोरङ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीको राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक गतिविधिलाई समेटेर उर्लाबारीमा ‘मदन भण्डारी संग्रहालय’ निर्माण गरिएको छ। पुरातत्व विभागको आर्थिक सहयोगमा करीब रु तीन करोडको लागतमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल उर्लाबारीले संग्रहालय निर्माण गरेको हो। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको सो संग्रहालय आइतबारदेखि
Manandhar March 31, 2018 March 31, 2018 अन्तराष्ट्रिय, समाचार	0
न्युयोर्क । नक्कली काम गरेको अभियोगमा न्युयोर्कको क्वीन्स सन्निसाइडमा कानुन व्यवसाय पक्राउ परेकी छिन् । न्युयोर्कको क्वीन्स क्षेत्रमा कानुन व्यवसाय गर्दै आएकी आन्द्रिया दुमित्रुले १ सय ८० भन्दा बढी नक्कली एसाइलम फाइल गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेकी हुन्। उनले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म १ सय ८० भन्दा धेरै नक्कली
Manandhar March 31, 2018 विचार	0
मुक्ति गौतम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभामा गरेको भाषणको रेकर्ड सुन्ने अवसर मिल्यो। आफूलाई अहिलेका नेताहरूमा अलि भरोसा भएको नेता ओली नै लाग्ने भएकोले भाषणको अवधिभरि डर लागिरह्यो ताकि कतै हौसिएर बोल्दा न चिप्लियून! आफूलाई मनपर्ने खेलाडी, कलाकार, नेता, आफन्त या विदेशमा बस्दा कुनैपनि नेपाली कुनै ठाउँमा चिप्लिएला वा केही अस्वाभाविक गर्ला
Manandhar March 31, 2018 मनोरञ्जन	0
Manandhar March 31, 2018 भिडियो, मनोरञ्जन	0
काठमाडौँ । गत चैत्र ९ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ’शत्रु गते’ ले ६ दिनको हिसाव सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा पत्रकार भेटघाटको आयोजना गर्दै राजधानीको लागि वितरक बिके फिल्म्सको तर्फबाट गोपाल काजी कायस्थ र मोफसलको लागि वितरक एफडी कम्पनिका बिक्रम पराजुली्ले संयुक्त रुपमा हिसाब सार्वजनिक गरेका हुन् । शुक्रबार देखि बुधबार
Manandhar March 31, 2018 जीवनशैली, समाचार, समाज	0